မုန်တိုင်း ထိခိုက်ပျက်စီးမှု များပြားလို့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ကက်ဘိနက် အရေးပေါ် အစည်းအဝေး ခေါ် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း မုန်တိုင်း ထိခိုက်ပျက်စီးမှု များပြားလို့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ကက်ဘိနက် အရေးပေါ် အစည်းအဝေး ခေါ်
epa05998538 People clear debris from their house in Sittwe, Rakhine State, western Myanmar, 30 May 2017. Some houses, trees and billboards in Sittwe have been damaged in the storm with no casualties reported, according to local sources. Tropical Cyclone Mora, which formed in the Bay of Bengal, is expected to hit Bangladesh, Northeast India and western Myanmar with strong winds and heavy rains. EPA/NYUNT WIN
မုန်တိုင်း ထိခိုက်ပျက်စီးမှု များပြားလို့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ကက်ဘိနက် အရေးပေါ် အစည်းအဝေး ခေါ်
မိုရာ ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှု ပမာဏ အလွန်များပြားတဲ့အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်ဖို့ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရက ကက်ဘိနက် အစည်းအဝေးကို မနေ့က မေလ ၃၀ ရက်နေ့မှာ ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။
ကက်ဘိနက် အစည်းအဝေးကို မနေ့က ညနေမှာ ခေါ်ယူတာ ဖြစ်တယ်လို့ ရခိုင်ပြည်နယ် လျှပ်စစ်၊ စက်မှုနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဦးအောင်ကျော်ဇံကို ကိုးကားပြီး နိရဉ္စရာသတင်းဌာနက ဖော်ပြပါတယ်။
မိုရာ ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လူနေအိမ်တွေ၊ စာသင်ကျောင်းတွေ၊ ဘာသာရေး အဆောက်အအုံတွေ၊ အစိုးရ အဆောက်အအုံတွေ၊ ဆိုင်းဘုတ်တွေ ပြိုလဲ ထိခိုက်ပျက်စီးမှု များပြားပြီး ထိခိုက်ပျက်စီးမှု စာရင်းတွေ ကောက်ယူနေပါတယ်။ နေရာတချို့မှာ ဖုန်းလိုင်း အဆက်အသွယ်တွေ ပြတ်တောက်နေပါတယ်။
Previous articleလေယာဉ်မယ်ရဲ့ လက်ကို ကိုက်ဖို့ ကြိုးစားမှုနဲ့ မြန်မာဒုက္ခသည်တစ်ဦး အဖမ်းခံရ
Next article2017 MAY 31 WEDNESDAY BUSINESS TODAY